सहयोगको अपिल- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पनौती नपा वडा नं. १२ निवासी म २१ वर्षीय सरोज तामाङको दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको हुँदा बयोधा अस्पताल बल्खुमा हेमोडाइलासिस गरिरहेको छु  । डाक्टरको सल्लाहअनुसार जतिसक्दो छिटो मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ  ।
मेरो घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । आजसम्मको उपचारमा जो भएको सम्पत्ति सबै सकिइसक्यो । अब कसैको सहयोगविना थप उपचार गर्न असमर्थ छु । तसर्थ देश–विदेशमा रहनुभएका सहयोगी व्यक्ति तथा संघ–संस्थासँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बनेपा शाखामा रहेको खाता नं. १८१०००५३१६१० मा आफूले सकेको रकम जम्मा गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु । साथै ९८१०३३९४४० मा सम्पर्क गरी थप जानकारी लिन सकिनेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:५१
संसद् व्यवस्थापक होइन
संसद् विधायिका हो, व्यवस्थापक होइन  । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यसले बनाएका ऐन–कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो  ।
ऐन–कानुन दीर्घकालीन हुने भएकाले त्यसमा विपक्षीको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ । सरकारमा विपक्षी हुँदैन भने संसद्मा हुन्छ । कानुनमा सबैको सरोकार हुने भएकाले नागरिक समाजका सरोकारवालाबीच पनि विधेयकमाथि बहस हुन आवश्यक छ । सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउँदै पास गराउने हैन । सरकारले दर्ता गराएकै विधेयकलाई सदरमात्र गर्ने भए, संसद्को के काम ? हामीले देखिसक्यौं, सरकारले बनाएको कानुन सदैव आफ्नो शक्ति बढाउने र राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने भएकाले विवादित हुँदै आएको छ ।
– शुक्रराज आचार्य, नयाँबजार, कीर्तिपुर